Ibsa waraqaa Ibsaa Nagawoo Caamsaa 28, 2015 Intarneetti Irratti facaaseef Oromia Shall be Free |
Ibsa waraqaa Ibsaa Nagawoo Caamsaa 28, 2015 Intarneetti Irratti facaaseef
bilisummaa May 30, 2015	Comments Off on Ibsa waraqaa Ibsaa Nagawoo Caamsaa 28, 2015 Intarneetti Irratti facaaseef
Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) seenaa miseensota isaa sirriti beekaa.Kan waan gaarii hojjataan saba isaaniii biraatti kabajaan beekamuu. Worrii waan gadhee hojjataan ammoo akkasumaa gadhumaa isaanitiin beekamuu.
Obboo Ibsaa Nagawoo Xaalayaa tokkoomuu Jaarmiyoolee fi guruulee ABO mormuu Caamsaa 28, 2015 barreefamee marsaa interneetti adda addaa irratti faacaasee arginee . Itti gadinilee. Namiin tokkoomuu qabsawoota oromoo mormuu kuni ennuu akka ta’ee miseensota,deeggartoota fi akkasumaas Ummata Oromoo waa jedhuu dirqii akka ta’ee hubannee. Ibsaa Nagawoo :
Bara 1988 bakka bu’aa, Caayaa A B O Djabuutii tayee, Jila’Qabsaaw’otaa
ABO goodina dhihaa irratti, argamee. Filmaata irratti angoo waan dhabeefi jechaa dhaaba keessaa ganee. ABOn dhaaba Fu’udallootaatti jedhee barreeffamaan facassee. Olola dhaabarratti ofaa turee.
Dhaaba Gumii Bilisummaa jedhu keessatti dahaannoo godhatee ABO qofarratti olola ofuu bira darbee bara 1998 biyya soomalee keessatti miseensota dhaabaa diigufi karaa horitiin yaalii godhaa ture.
Bara 2005 ABO ULFO keessaa raraafinne jedhee dhaabarratti Olola facaasaa ture.
Bara 2008 yeroo jirjiramni dhalatu Angoon argadha jedhee ULFO keessaa
ganee ABO Jijjiiramatti dabalamee ture. Yeroo san dhaabichi inni keessaa gane miseensumma mulquu isaa dhaganyee ture .
Bara 2011 Sababa adda addattin jijjirama keessaa ganuun isaa
Bara 2012 akkuma nama tokkkotti gama GQM ABO dabalamee waan
dandayu dirqama itti laatama ture. Amaalii abbaa waan hin dhiifneefi akkuma
bubbuluun amala jirjirachaa dhufee jaarmayaa keessa taa’ee jaarmayaa biraa
gaafatama gaafachaa ture keessattu qaama jaarmayaa kan yeroo san shanee
gumii ABO jedhamee beekamuuf akka barreessa godhan gaafachaa ture.
Erga gama Gurmuu qabsaa’ota dhufe ammalloota inni mudhisse :
Dhimma murtiilee GQM ABO kan waloon hojjatamaa turee yeroo dheeraafi murtii dhunfaa isaatin gama ufii barbaadetti dhiibufi yaalufi murtii hoogganni waloon dabarsu akka hujii irra hin oolle gochuufi yaalaa turee.
Naamusa seerri ABO hin hayyamne qunnamtii seeraa alaa geggeessa turuu isaa yeroo irratti dhaqqabamu fudhachuu didee naamusa hooggana jaarmayaa tokko irraa eegamu guutachuu hanqatee
Waliigaltee jarmayoota oromoo kan bilisummaafi walabummaa oromiyaa fallaman keessatti jalqabame gufuu guddaa ta’ee argamuufi bakkota tokko tokko keessatti murtii waloon kennamu dura dhabbachuun miseensota keessatti jeequmsa uumuufi tattafachaa ture.
Yeroo dhihoo kana keessatti guutumaa guututti murtii waloon kennamufi ajaja hoogganaa ol’aanaa GQM ABO irraa itti kennamu fudhattee hujitti hiikkuu diddee.
Badillee asi olitti tareessinne kana akka hojjatuu osoma arginuu obsaaf turee. Obsa hoogganni isaaf godhe dagatee amma ammo maqaa GQM ABOn waraqaa intarneetti irratti faacasuu egaale. Ibsaa Nagawo gantuudha malee maqaa GQM ABO waan tokkos gochuu fi jechuu akka hin dandeenye caasaa jaarmaya keenya kan biyya keessafi biyya alaa jiran hunda beeksifinaa.
Akkasumaas dhaabota xalayaa sobaa inni itti barreesse kan beekuu qabdan Ibsaan hunda keessaniif haaraya miti. Akka nama tokkotti isin wajjin dubbachuun mirga isaati. Garuu maqaa GQM ABO tiin eennun wajjin akka dubbachuu hin dandeenya isin beeksifna.
Gurmuun Qabswwootaa ABO gaafa caamsaa 27, 2015 irraa jalaqbee Jaarmiyoolee fi Guruumalee ABO birootiin wolitti makamee waan jiruuf amma achii namiin maqaa GQM ABO tiin dubbatuu ykn barreessuu akka hinjiree namiin hundii akka beekuu jenna. Galatoomaa !!
Abdataa Shuukee, Marihachiisaa fi gaafatamaa Jila GQM ABO kan ture.
Injifannoo Ummata Oromoofi !
Tags Abo GQM ULFO
Previous Ethiopia is Africa’s biggest prisoner of journalists.
Next GARAAGARUMMAA GOOFTAA KIRISTIYAANAA FI WAAQA WAAQEEFFANNAA